Orodyahan Kenya u dhashay oo jebiyey rikoorka dunida ee maaradoonka dheer - Halbeeg News
Orodyahan Kenya u dhashay oo jebiyey rikoorka dunida ee maaradoonka dheer
in Ciyaaraha, Soomaaliya, War Degdeg, Xulka
BERLIN (HALBEEG) – Orodyahan u dhashay dalka Kenya oo lagu magacaabo Eliud Kipchoge, ayaa rikoor cusub oo caalami ah ka dhigay orodka maaradoonka 42km, oo shalay oo Axad ahayd lagu qabtay magaalo madaxda dalka Germany ee Berlin.
Kipchoge oo horay guulo uga soo hoyay ciyaaraha olombikada, wuxuu masaafadda maaradoonka ku odray muddo dhan labo saac, hal daqiiqo iyo soddon iyo sagaal ilbiriqsi (2:2:39), isagoo 78 ilbiriqsi ka yaraaday rikoorkii kan ka horreeyey oo sannadkii 2014 uu dhigay orodyahan isla dalka Kenya u dhashy oo lagu magacaabo Dennis Kimetto.
“Ma hayo ereyo aan ku qeexo maalintan… runtii aad baan ugu faraxsanahay in aan jabiyey rikoorkii yaalley, iyo weliba in ciyaaryahankii iigu soo dhowaa een wada ordaynay uu ii jiray masaafo ku dhow shan kiilo mitir” ayuu yiri isaga oo ay farxad badani wajigiisa ka muuqato lana hadlayey warbaahinta.
Ciyaaryahankan ayaa loo aqoonsan yahay midka ugu wanaagsan orodyahannada ka qayb galay orodka maradoonka ee masaafada dheer, waxaana xusid mudan in hal mar oo qura laga badiyey intii uu kusoo dhex jiray xilli ciyaareedkiisa.
Saddex jeer ayuu ku guulaystay orodka maaradoonka ee London, wuxuu sidoo kale sannadkii 2016 bilad dahab ah ka qaadaty ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil.
Dalalka Geeska Afrika ayaa ah kuwa ugu guulaha iyo ka qaybgalkaba badan ciyaaraha oroddada ee caalamka, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Ethiopia.
Iskuulada Turkida ee Muqdisho oo hay’adda Macaarif lagu wareejiyay
Jabuuti oo iska fogaysay in ay ku lug leedahay tahriibinta hubka